a - TECHNOMANIAC's - BLOG: November 2007
Steve - Most Powerful in Fortune - Deserve?
မနေ့က ထွက်တဲ့ Fortune ရဲ့ ကမ္ဘာ့ အတော်ဆုံး၊ စွမ်းရည်အမြင့်ဆုံး စီးပွားရေး သမား ၂၅ ယောက်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတုို့၊ ကျွန်တော်တို့ သိတဲ့လူတွေ တော်တော်များများပါပါတယ်။ =P ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီစာရင်းကို ထိပ်ဆုံးကနေ ယူထားတာတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စတီးဂျော့ဗ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Brent Schlender ရဲ့ ဆောင်းပါးကို အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရမှာ ပျင်းတဲ့လူတွေအတွက် ကျွန်တော် အနှစ်ချုပ်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီလူကြီး စတိဗ်ဟာ ဘာလို့ ထိပ်မှာရပ်နေရသလဲ ဆိုတာ စာဖတ်သူတို့ နည်းနည်းတော့ သဘောပေါက်မိပါလိမ့်မယ် လို့ထင်ပါတယ်။
စတိဗ်ကို စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရှင်ကြီး ဂျင်မ်က 'စီးပွားရေးရဲ့ ဘီသိုဗင်' ကြီးလို့ပြောပါတယ်။ ဘာလို့ မိုးဆက် မဖြစ်လဲမသိ။ စတိဗ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်စွမ်းရည်၊ စိတ်ဓါတ်ပျင်းပြမှု၊ အဲ့ဒီ ပလတ်စတစ်တွေ၊ စီဒီပြားတွေနှင့် ကွန်ပျူတာတွေထုတ်ပြီး လူတွေကို ဘယ်လိုရောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ အမြင်တွေကို ဂျင်မ်က ချီးကျူးနေပါတယ်။ နောက်ပြီး Suppliers, Partners တွေ၊ ၀ယ်တဲ့လူတွေကို သူ့ဘက်ပါအောင် ပြောနိုင်ဆွယ်နိုင်တဲ့ စိတ်ပညာကြီးကလည်း အတော်ကြီးပါတယ်တဲ့။
ပန်းသီး ကုမ္ဗဏီဟာ Fortune 500 မှာ အဆင့် ၁၀၀ကျော်ပါတယ်။ Dell တို့ HP တို့တောင် အဆင့် ၁၀ ကနေ ၃၀ ကြားပါပေမယ့် ပန်းသီးကတော့ အတော်နိမ့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလူကြီး စတိဗ်ကတော့ ခုဒီစာရင်းမှာ နံပါတ် ၁ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ကြရအောင်။
သူဟာ ကွန်ပျူတာလောကကြီး ၁ခုလုံးကို ၂ကြိမ်တိုင်တိုင် ဂယက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ လူတွေက မိန်းဖရိမ်ဆာဗာကြီးတွေ၊ မီနီကွန်ပျူတာကြီးတွေနှင့် ကျေနပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ စတိဗ်က ပန်းသီးကနေပြီး ၁၉၇၇ မှာ PC ဆိုတာကို စခဲ့ပါတယ်။ သန်းချီပြီး အောင်မြင်သွားပြီး industry ၁ခုလုံးကို personal computer တွေနှင့် လှုပ်နိုးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့ ၁၉၈၄ ကတော့ ပိုပြီး ကြီးမားတဲ့ ဂယက်၁ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ မြင်နေရတဲ့ Graphical User Interface ဆိုတာကို သူက စပြီးအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ မြင်နေရတဲ့ အိုင်ကွန်လေးတွေ၊ ဖိုလ်ဒါလေးတွေရှိလာတာပေါ့။ Xerox ကနေ သွားခိုးတယ်လို့ ပြောချင်ပြောပါမယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကလည်း မသေးပါဘူး။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ဟာ အဲ့ဒီတုံးက သေးသေးလေးပါ။ သူက နောင်တစ်ချိန် ပန်းသီးစီးပွားပျက်ချိန်မှာ စတိဗ်ဆီက OS ကို ပြန်ဝယ်လိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ခုခင်ဗျားတို့ သိပ်ချစ်တဲ့ Windows တို့ရဲ့ ဘိုးအေကို ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်နှစ် အနည်းငယ်ကြာတော့ စတိဗ်က စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းကြီးကို ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သိနေတဲ့ ပရင်တာဆိုတာတွေ သူက စပြီးမိတ်ဆက်ပါတယ်။ WYSWIG ဆိုတာကို စပြီး ကြေညာခဲ့ပြီး Laser Printer ဆိုတာကို ကမ္ဘာနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ Internet စပေါ်ခါစမှာ သူက PC networks တွေကို လည်း ကမကထနှင့် လိုက်လံ ခေါင်းဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
နောက်တော့ ကြားထဲမှာ အလုပ်ထွက်သွားပြီး Pixar ကို ထောင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ မြင်နေရတဲ့ 3D Animation ကာတွန်းကားတွေရဲ့ အစပါပဲ။ ကာတွန်းရုပ်ရှင်လေးတွေ ကြည့်လို့ကောင်းတိုင်း ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလူကြီးပြေးမြင်ပါတယ်။ Disney က စာရွက်ပေါ်မှာ ဟိုခြစ်ဒီခြစ်နှင့် ကာတွန်းရေးစားနေရတဲ့အချိန်မှာ စတိဗ်က Toy Story နှင့် လမ်းပြခဲ့ပါတယ်။
နောက်တော့သူ ပန်းသီးကို ပြန်လာပြီး Newton ကို စထုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခုသိနေတဲ့ PDA ဆိုတာပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒါ အဲ့ဒီကစတာပဲ။ သူက စလုပ်ပြခဲ့ပြီး နောက်တော့ အဲ့ခေတ်က ဘယ်သူမှ မသုံးတဲ့အတွက် ဈေးကွက်ကို Palm ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။
နောက်အကောင်းဆုံးပြကွက်က iPod ပဲဗျ။ ဂျပန်မှာ စွာကျယ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sony ကြီးကို သူက နောက်ကောက်ချခဲ့တယ်။ ဒီအကြောင်းကို နောက်ကျွန်တော် Sony Case Study ကျမှပဲ ရေးတော့မယ်ဗျာ။ Walkman တွေများ လမ်းဘေးရောက်သွားတာ သနားစရာပါပဲ။ ခုတော့ အိုင်ပေါ့တွေက သန်း ၁၅၀ကျော် ရောင်းခဲ့ရပြီ။ ဒါက personal audio industry ကို ပြတာဗျ။
နောက်တော့ သူက ဟောလီးဝုဒ်ကို သွားတယ်။ music industry တွေနှင့် ညှိတယ်။ ပြီးတော့ ပြောတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ခွေတွေကို အဲ့လို ကူးကူးပြီး ရောင်းစားနေမယ့်အစား ကျွန်တော်က ရောင်းပေးပါရစေ။ Digital Age ဗျ။ အင်တာနက်ဆိုတာ ရှိတယ်ဆိုပြီး။ အင်တာနက်ခေတ်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချကာ သီချင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေရောင်းခဲ့လေရဲ့။ ခုဆုို iTunesဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သီချင်းစတိုးကြီး ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
Operating System မှာလည်း OSX ဟာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ပေမယ့် အကောင်းဆုံး OS ဆိုတာကို ပညာရှင်တွေ လေ့လာသူတွေကိုယ်တိုင်က လက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Software မှာလည်း လူတွေ ဘာကြိုက်တတ်လဲဆိုတာကို သူလုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကြီးကတော့ ဘာမှမပြောပါဘူး။ အဓိကက သူတို့ပစ္စည်းတွေ ရောင်းရဖုို့ပဲ သူတို့ OS ပိန်းတာက အဓိကမဟုတ်ဘူးလေ။ ဟုတ်ဘူးလား။
နောက်တော့ Retailing ဈေးကွက်ကိုလည်း ကောင်းကောင်းသင်ပြခဲ့တယ်။ ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုရောင်းရမလဲ၊ Deliver လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ပညာပေးသွားတယ်။ Dell ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး အွန်လိုင်း retail store, computer shop လို့ဆိုကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့သိလား။ သူတို့ သုံးနေတဲ့ စနစ်က ပန်းသီးရဲ့ WebObjects ပါတဲ့ဗျာ။ အခုတော့ ပြောင်းရင်ပြောင်းသွားလောက်ပြီ။ ကိစ္စမရှိတော့ပါဘူး။ Dell sales ကထိုးကျနေတာ သိသိသာသာကြီးဗျ။ မသုံးလို့များ ကျသွားလေရော့သလား။
နောက်တော့ သူကအဲ့လို ဇုန်အကြီးကြီးတွေမှာ Mastero ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ ခု ဆယ်လူလာမားကတ်ကိုလည်း ရောက်လာပြန်ပြီဗျ။ မကြိုက်တဲ့လူတွေက ဘာပဲပြောပြော လူတွေက ခုလည်း အိုင်ဖုန်းမှ အိုင်ဖုန်းဖြစ်နေပါပြီဗျာ။ နည်းပညာတော်လှန်မှု ကို လှလှပပလေး ကူးသွားခဲ့တာပဲ။ အဲ့ဒိ အလူမီနိယမ်ပြားလေးတွေဟာ လူတွေကို တော်တော် အကျိုးပေးနေ/ပေးလာတော့မှာက သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။
အကျဉ်းလေး တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စတိဗ်ဟာ ကွန်ပျူတာ၊ ဟောလီးဝုဒ်၊ တေးဂီတ၊ retailing၊ မိုဘိုင်းဖုန်း တွေကို ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ တခြား စွမ်းရည်တွေဖြစ်တဲ့ လူတွေကို ပြောသမျှနားထောင်စေ၊ စည်းရုံးနိုင်တာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ပန်းသီးက နောက်ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး၊ အသံသွင်းခြင်း၊ ဓါတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်း စတာတွေမှာလည်း ဆရာ၁ဆူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆို Steve Jobs ဟာ Walt Disney ရဲ့ အကြီးဆုံး ရှယ်ယာဝင်ဖြစ်နေပါပြီ။ သူ့လိုမျိုး စီးပွားရေးလောကမှာ Influence ကြီးတာ ဘယ်သူမှ မရှိသေးပါဘူးဆိုပြီး Fortune Editor က မှတ်ချက်ချပါတယ်။
အခုချိန်မှာ ပန်းသီးကို အဖက်ဖက်က တိုက်ခိုက်နေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့လည်း ပြန်ဖိုက်နေရတာတွေလည်း အများကြီးပေါ့ဗျာ။ အဓိကကတော့ ပါဝါကြီးလို့တဲ့။ ဒါပေမယ့် စတိဗ်ကပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မှာ ပိုက်ဆံရှိလို့ ပါဝါကြီးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က သုံးစွဲတဲ့လူတွေ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကောင်းကောင်းထုတ်ပေးလို့ customers တွေက ပျော်ရွှင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြတာပါ။ ဒီအရာကမှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိက ပါဝါဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်သလို သူတို့လည်း ကြိုက်နှစ်သက်စေချင်ပါတယ်။
ကဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ကော ဘယ်လိုမြင်သလဲ။ သူ ပထမနေရာရသွားတာ တရားပါ၏လား။
Sound off in Comments ! =D
Posted by Wai Phyo at1:26 AM0comments
Individualism | Collectivism | Me
ကျွန်တော် ဟိုတလောက အလုပ်က သူဌေးနှင့် စကားပြောဖြစ်တုံးဆွေးနွေးမိတာလေး ၁ခုပါ။
မြန်မာပြည်က ကျောင်းပိတ်ရက် အလည်သွားပြီး ပြန်လာခါစပေါ့။ အလုပ်က နားထားပေမယ့် လမ်းကြုံတုံး သူတို့မင်္ဂလာဆောင်လည်း မတက်လိုက်ရတာနှင့် (ကိုယ့်ကိုမဖိတ်တာနှင့်) သွားနှုတ်ဆက်တယ် ဆိုပါတော့။ ဘာညာသရကာ နေကြာကွာစိ ကွမ်းတညက်ခန့်အကြာ ပေါက်ကရတွေလျှောက်ပြောပြီးတော့ နောက်ဘာစိတ်ကူးမိတယ် မသိပါဘူးဗျာ၊ ကျွန်တော် ရုပ်ရှင်ဒီဗွီဒီတွေဘက် ရောက်သွားတယ်။ ကုမ္ဗဏီက ဗီဒီယို Retail လုပ်ငန်းဆိုတော့ ခွေတွေကတော့ အပုံလိုက်ပေါ့ဗျာ။
အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်က သွားပြောမိတယ်။ ကျွန်တော် မြန်မာပြည်ပြန်သွားတာဗျာ ခွေတွေ အများကြီးဝယ်လာတယ်။ ကူးခွေတွေပေါ့ အရမ်းဈေးပေါတယ်ဗျာ။ စင်္ကာပူမှာ ဒါမျိုးမရဘူးပေါ့။ ဘာညာနှင့်။ အဲ့ဒီမှာ ဇာတ်လမ်းက စတာပဲ။
သူဌေးကပြောတယ်။ ဒေါသထွက်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ဗျ။ သူ အဲ့ဒါမျိုးတွေဘယ်တော့မှ မ၀ယ်ပါဘူးတဲ့။ ဆက်ပြောပါတယ်၊ ကျွန်မတို့ အမေရိကန်မှာ အဲ့ဒီ အလုပ်ဟာ အင်မတန် ရှက်စရာကောင်းပါတယ် ဆုိုပြီး သတ်မှတ်ထားပါတယ်တဲ့။ ဒါနှင့် ကျွန်တော်တို့ ဆက်ဆွေးနွေးဖြစ်ကြပါတယ်။ အခြေအနေကို ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အရှေ့နှင့်အနောက်၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ခံယူချက်တွေ ကွာဟမှုအပေါ်အများကြီး အခြေခံပါတယ်တဲ့။
အမေရိကန်မှာ လူတွေက တစ်သီးပုဂ္ဂလ၀ါဒ individualism ကို အလေးထားပါတယ်။ သူတို့က ဒီလို အော်ရီဂျင်နယ် ခွေတွေ ၀ယ်ယူလိုက်ရတာကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အတုဆိုရင် ပစ္စည်းညံ့လို့ ယေဘူယျအားဖြင့် သတ်မှတ်ပါတယ်။ အများစုက ရှုတ်ချတာတွေလည်း လုပ်ကြပါတယ်။ သီချင်းတွေကို အစစ်ဝယ်လိုက်ရမှ အသံကောင်းတယ်ဆိုပြီး ပီတိတဖြာဖြာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါတွေကို iTunes ကနေ သီချင်းတွေ အရမ်းရောင်းရတာ၊ Leopard တို့၊ Vista တို့ ရောင်းရတာ တွေကို ကြည့်ရင် အခြေခံအားဖြင့် နားလည်နိုင်ပါတယ်။ သူများတွေက ဟေး မင်းလည်း ဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်ပါလား ဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွေကို ဂရုမစိုက်ပါဘူးတဲ့။ ရှိရင်လည်း နည်းပါတယ်ဆိုပါတယ်။ အများလုပ်တိုင်း လိုက်မလုပ်ဘဲ ကိုယ့်ခံယူချက်နှင့် ကိုယ့်သိက္ခာနှင့် ကိုယ် ၀ယ်ယူအားပေးကြပါတယ်။ ကိုယ့် လုပ်အားခနှင့် ၀ယ်တာကို ပိုပြီး သဘောကျကြပါတယ်တဲ့။ ကျောင်းသားတွေဆိုရင်လည်းကြည့်ပါ။ အိုင်ဖုန်း ထွက်ခါနီး၊ Leopard ထွက်ခါနီး အချိန်တွေမှာ အသေအကြေ ပိုက်ဆံရှာကြတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလို ကြိုးစားတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကတော့ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်။ ဒီမနက်ကတောင် ကျွန်တော် OmniFocus ရဲ့ ငါးရက်အတွင်းမှာ ဒေါ်လာ ၁သိန်း ရောင်းရတဲ့ အီးမေးလ်အကြောင်းကြားစာကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့လိုဆော့ဖ်ဝဲ သေးသေးလေးတောင် အတော်ရောင်းရရင် စဉ်းစားကြည့်တော့ဗျာ။ ထားပါတော့ ဒါက အနောက်ကမ္ဘာပါ။
တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ အရှေ့တိုင်းကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် အာရှသားတွေဟာ အများအားဖြင့် Collectivism ကို ကျင့်သုံးပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ .... အမ်း... တစ်ယောက်လုပ်ရင် အကုန်လိုက်လုပ်တတ်တာတွေ၊ Homogeneous လို့ခေါ်တဲ့ တသားတည်းကျမှု၊ စိတ်တ၀မ်းတည်းကျမှုတွေ ပေါ့ဗျာ။ တစ်ယောက်က ဒီ ကူးခွေတွေဝယ်တယ်။ ကောင်းတယ်၊ ဟေ့ကောင် မင်းလည်းကြိုက်ရင် ငါ့ဆီက ကူးလိုက်လေ၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်လုိုက်ပါလား ဆိုတာနှင့် နောက်တစ်ယောက်က စက္ကန့်မနှေးပါဘူး။ အများကဒီလိုလုပ်ရင် ကိုယ်လည်း လိုက်လုပ်မှာပေါ့၊ ဘာလို့ဝယ်ရမှာလဲ ဆိုပြီး ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ Piracy ဆိုတဲ့ ပြဿနာ ပေါင်းစုံစပါတော့တယ်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေမှာ ပြဿနာတွေ ပေါင်းစုံရှိပါတယ်။ သီချင်းခွေအစစ် ၁ခွေဝယ်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်မှ ခက်ပါတယ်။ နားထောင်လိုက်ရတာနှင့် ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရတာ မတန်ပါဘူး။ Sony, Universal လို ကုမ္ဗဏီကြီးတွေ မရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကိုတော့ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ အင်္ဂလိပ် ရုပ်ရှင်၊ သီချင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲ အစစ်မှ ရောင်းကို မရောင်းပဲ။ မ၀ယ်တာ အပြစ်မရှိဘူး =P kwikwi. ထားပါအုံး။ အခုဖြစ်နေတာက စင်္ကာပူလို ဈေးပေါတဲ့ နေရာမှာလည်း လူတွေက အစစ်ကို မ၀ယ်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း Apple က သူ့ iTunes ကို အာရှမှာ ဖြန့်ချီဖို့ အတော်စဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်။ အခုလည်း Japan မှာပဲ ဖွင့်သေးတယ်။ အဆိုးဆုံးက တရုတ်ပဲဗျာ။ ဒီကောင်တွေ ဈေးကွက်က အခြားပစ္စည်းတွေ အတွက် အင်မတန်ကောင်းပေမယ့် Musics, Videos, Softwares တော့ သွားမစမ်းရဲကြလေဘူး။ တစ်ခါထဲ တရုတ်တွေ လက်ချက်မိသွားရင် ကိုယ့်ဆော့ဖ်ဝဲက ၁ဘီလီယံ ကော်ပီလောက် နေ့ချင်းညချင်းပြန့်သွားမယ်၊ တပြားမှတော့ ရမယ်မထင်ဘူး။ =P
ဒီလို ကွာခြားချက်အကြီးကြီး ဟနေတာကို စေ့ပေးဖို့ဆိုတာတော့ အချိန်ယူရအုံးမှာပါ။
မနက်က Today Newspaper ထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရသလို Big Mac Way ကိုလည်း စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။ အဲ့နည်းက ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Macdonald ရဲ့ Burger ရောင်းပုံပါ။ အမေရိကားမှာ ၆ကျပ်ဆိုရင်၊ စင်္ကာပူမှာ ၄ကျပ်၊ မလေးမှာ ၃ကျပ် ဆိုပြီး သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးနှင့်လိုက်ပြီး ဈေးကို ထိန်းထားပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲတွေလည်း အဲလိုရောင်းသင့်နေပါပြီ။ အဲ့ သီချင်းခွေတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဂိမ်းခွေတွေရောပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ personally အစစ်ကိုသာ အားပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင် ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ မသမာတဲ့နည်းလမ်းတွေ သုံးခဲ့ရပါတယ်။ မကောင်းဘူးလို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ယူဆထားတဲ့ ဒီအလုပ်ကို လုံးဝ အကောင်အထည်ဖော်၊ ၀ယ်ယူအားပေးဖို့လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနှင့် ကိုယ်ဝယ်၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သုံးရတဲ့ အရသာ ဘယ်ဟာနှင့်မှမတူပါဘူး။ ကျွန်တော် အလကားရလို့ သုံးနေသော vista, mac os လိုင်စင် အစစ်များက တနေ့တနေ့ သက်သေခံနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင် ဒီအရာကို အားပေးတယ် မပေးဘူးဆိုတာတော့ တစ်ခြားကိစ္စပေ့ါဗျာ။ =D
ဘာပဲပြောပြော သူဌေးကတော့ ကောင်းကောင်းလေး ကျွန်တော့်ကို နှိပ်ကွပ်လုိုက်ပါတယ်။ အော် ပြောမိတဲ့ ငါ့အပြစ်။
Posted by Wai Phyo at9:09 PM0comments
Fullmoon day of Tazaung (Dazaung) Mone
I forgot to mention that today is "Fullmoon Day of Dazaung Mone". A very special day in Myanmar. It's also called Great day of Samaññaphala. There are country-wide festivals and grand ceremonies every year. =)
For my foreign folks, if you are interested, please follow these link to skim the topic.
- our Website dedicated on Twelve seasons of Myanmar ( :P )
- Explanation on Samaññaphala
Enjoy the great day, folks. May you have good fortune! ..
Posted by Wai Phyo at8:00 PM0comments
Thx Giving - Black Fri - IDP Interview !
ဒီအပတ်ကတော့ ထူးခြားတဲ့ရက်ထူးနေ့ထူးတွေနဲ့ ပြီးသွားပါပြီ။ အာဆီယံ ဆွေးနွေးပွဲကြောင့် ကျွန်တော့် အလုပ်ပတ်ပတ်လည်မှာလည်း ရဲတွေ၊ လုံခြုံရေးတွေနှင့် ရှုပ်ယှက်ခတ်နေခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်မှာ နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ Thanksgiving ကြောင့်အကုန် အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အတွက် ဘလော့ခ်တောင်မရေးနိုင်ကြပါဘူး။
အဲ့ဒီနေ့ ပြီးတဲ့နောက်တနေ့ကို Black Friday လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲ့နေ့ဟာ ရှော့ပင်းထွက်လို့ အကောင်းဆုံးလို့ဆိုကြပါတယ်။ ဈေးတွေလည်း မတရားလျှော့ပေးထားပါတယ်။ စင်္ကာပူ တူဒေး သတင်းစာမှာတောင် မနေ့က အချပ်ပိုတွေ အထပ်လိုက်နှင့် ဈေးလျှော့ကြော်ငြာတွေပါပါတယ်။ နောက် ကျွန်တော် Apple Products တွေ ဈေးတော်တော်ချထားတာတွေကိုတော့ တွေ့လိုက်ပါသေးတယ်။
အခုတလောတော့ စာရေးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်း တနေကုန် ကျောင်းကိစ္စ အင်တာဘူးတွေ လျှောက်သွားနေပါတယ်။ အလုပ်များတဲ့ဘ၀ကို ရတုံးလေးယူနေပါတယ်။ =p အဖေ့ဆီက ပိုက်ဆံဘယ်လို ချေးရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေတာ ခေါင်းလည်း အသေနောက်နေတော့တာပါပဲ။
ှမက်ခ်ဘွတ်ခ်သေးသေးလေးတွေ ထွက်တော့မယ်လို့ အနံ့ရထားပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော် OSX 10.5 Leopard ကို Upgrade နေပါပြီ။ =) နောက်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ ထပ်ရေးပါ့မယ်။
p/s Starhub မှာ ဒီနေ့ မန်ယူပွဲ မပြတဲ့အတွက်လည်း ၀မ်းသာပါ၏။
Posted by Wai Phyo at7:40 PM0comments
Pay Pal Reopen - Mixed Feelings - England Blunder
ကျွန်တော်ကတော့ Mixed Feelings Day လို့ပဲဆိုပါရစေ။
- လူက နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် အလုပ်မှာ နည်းနည်း efficiency ကျသွားပါ၏။
- မနေ့က Course & Career Fair ပြန်လာပြီးတော့ အလုပ်ပိုရှုပ်သွားတယ်၊ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ကျောင်းတက်ဖို့နှင့် ဘာနှင့်ညာနှင့် လေ့လာရတာကလည်း အမောပါပဲ။
- ခေါင်းစားစရာ ကိစ္စ ၂ဆ၊ ၃ဆ ထိုးတက်သွားပါသည်။
- အလုပ်ကိစ္စ မပြီးသေးသည်များ အခုဒီစာရေးတဲ့ အချိန်ထိ ဆက်လုပ်နေပါ၏။
- အင်္ဂလန် ကြီး ပြုတ်သွားတဲ့ အတွက် သနားသော်လည်း တကယ့် Rubbish Performance ဖြစ်နေတော့လည်း ဘာမှ မပြောလိုပါ။
- Wikipedia ကို ပိုက်ဆံလှူလိုက်ရလို့ ပျော်ပါသည်။
- PayPal account ကို ပြန်ပြီးဖွင့်ပေးလိုက်လို့ ကျေးဇူးတင်နေပါသည်။
- နောက်ဆို အဲ့ဒီ ခွေးသူခိုးတွေ အားအားယားယား မဘန်းပါနှင့်လို့လဲ ဆဲချင်ပါသည်။
- တနေ့တနေ့ အဲ့ဒီ Kindle အကြောင်းပဲ တွေ့နေရတာ သိပ်မဟုတ်တော့ပါ။
- ၃ရက်အတွင်း Leopard သွင်းဖို့ ကြိုးစားပါမည်။
Posted by Wai Phyo at10:13 PM0comments
Boring Boring Week
အလုပ်များတာက တစ်ချက်ရယ်။ ဘာ ထူးထူးခြားခြား နည်းပညာ သတင်းရယ်မှ မရှိဘဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ဂူဂယ်က သူ့ Android ကြီးကို ကြော်ငြာသွားပြီး ပြီးသွားတယ်။ အမေရိကန်မှာ စတော့ခ်မားကတ်လည်း ဂယက်ရိုက်နေတာမို့ ပန်းသီး၊ အင်တဲလ်၊ ဂူဂယ် ဈေးတွေအကုန်ထိုးကျပြီး ခပ်လေးလေးကြီးဖြစ်သွားတဲ့ သီတင်း၁ပတ်ပဲလို့ ဆိုရမယ်။
ပိုဆိုးတာက International Week ဆိုတော့ ဘောလုံးပွဲတွေလည်း နားထားတယ်ဗျာ။ တနေ့တနေ့ အင်္ဂလန်အသင်း ဘယ်ပုံဘယ်နည်း မာလကမလဲ ဆိုတာကိုဘဲ နည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဆွေးနွေးနေကြတယ်။ အစ္စရေးက ရုရှားကို သမလိုက်လို့ ပျော်သွားတဲ့ မက္ကလာရင် မျက်နှာကြီးလည်း သတင်းစာထဲမှာ ထောင့်စုံအောင်ပါလာတယ်ဗျ။
ဒီမနက်မှာတော့ အမေဇုန်ရဲ့ Kindle က တစ်ချက်တော့ ထလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အီးဘွတ်ခ်ဖတ်ရတာ မျက်စိညောင်းလို့ အဲ့ဒီစက်ကို သိပ်စိတ်မ၀င်စားသေးဘူး။ နောက်ကောင်းတယ်ဆိုမှ ကြည့်ပြီး ရီဗျူးလုပ်တာပေါ့ဗျာ။
စင်္ကာပူမှာတော့ အိုင်ဖုန်း နောက်လ ရောက်မယ်ကြားတယ်။ Starhub ရဲ့ Contract နှင့်ဆိုပဲ။ ၀ယ်ချင်တဲ့လူများတော့ ပိုက်ဆံစုထားပေရော့။
ဆောင်းပါးသုံးလေးခု ရေးစရာတွေတော့ နောက်နေ့မှပဲရေးတော့မယ်။ ခုတော့ စာအုပ်သွားဖတ်လိုက်ဦးမယ်ဗျိုး။
Posted by Wai Phyo at9:53 PM0comments
Safari 3.0.4 - New Bugs & Features
Safari Beta 3.0.4 rolled out for Windows. I found out some new good fixes as well as bad stuff!
- Spelling, it's cool. Check spelling whenever you are typing.
- Grammar, it's not bad. I typed "I doesn't eat". It's showing errors! Plus, whole document checking is great, too.
- GMail have Gtalk Panel in the sidebar now.
- Blogger's create post seems to have Labels support now.
- Standard CRT setting in Appearance might please some folks.
- Oh yea, new Shortcuts. On par with FF now.
- Default Bookmark Bar has YouTube, GoogleMap, Wikipedia ( thx TZO for pointing me this)
- Why I can't move my cursor in "Blogger Create Post's Title Input Box"?
- Can't type Burmese/Zawgyi in "Create Post TextArea" anymore.
- Resizing support is great but it's flaky and shaky.
- Download Window's "Minimize,Close" looks funny.
- What else, ... hmm ...
That is all for now. Any new points, I'll update the list.
Posted by Wai Phyo at11:58 PM0comments
Disable/Enable Trackpads with Batch File
ကျွန်တော့် Mouse Driver ရသွားတော့ Vista မှာ ပြန်သုံးလို့ရသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်ကတည်းက မကျေမနပ်ဖြစ်နေတာ ၁ခုရှိသေးတယ်ဗျ။ Trackpad ပဲ။ အဲ့ဒီကောင်ကို ကျွန်တော် Disable/Enable လုပ်ရတာ ခဏခဏ အလုပ်ရှုပ်တယ်ဗျာ။ အဆင့်တွေအများကြီးသွားပြီး ကျွန်တော် သွားသွားနှိပ်ရတာ၊ Disable မလုပ်ရင်လည်း ကျွန်တော် စာရိုက်တိုင်း သွားသွားငြှိနေတာနှင့် ဒုက္ခရောက်တယ်။ OS X မှာတော့ Mouse Preferences မှာတင် ရွေးထားလို့ရတယ်။ ထားပါတော့ .. ဒါနှင့် Command-line က လုပ်ဖို့ ကျွန်တော်စလုပ်တယ်။ Devcon ( Device Manager ကို Command Line က သုံးတာ) ရှိနေတာပဲ ဆိုတာကို တွေ့သွားပြီး ကျွန်တော် Batch file လေး ၂ခု ခပ်သုတ်သုတ် ရေးလိုက်တယ်။ သုံးချင်တဲ့လူတွေ အတွက် အောက်မှာ ပေးလိုက်ပါတယ်။
1) Download devcon.exe from me. Or if you are paranoid, you can also get from my big uncle site (eh, Microsoft, i mean).
2) Put that exe into C:\_ directory. You can also put it any where you wish but you have to change the batch files yourself, then =).
3) Download these Enable batch file and Disable batch file onto your Desktop or any where you like.
4) Run those two files alternatively to enjoy using your mouse without tangling your trackpad anymore!
p/s Any problems, feel free to shoot any comments! =)
Posted by Wai Phyo at12:07 AM0comments
Solution : Bootcamp & Vista Mouse Problems
ကျွန်တော် တနေ့က TravelPac Mouse ၁လုံး ၀ယ်လိုက်တယ်။ အလုပ်က လက်ပတော့မှာလည်းရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလက်ပတော့မှာလည်း အိုကေတယ်။ ကျွန်တော့် Macbook ရဲ့ Vista မှာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော့် Mac OS X မှာတောင် ရနေတယ်ဆိုတော့ ဒီကိစ္စက တော်တော် စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်သွားတယ်။ ဒါနှင့် Driver ရဖို့ ကြိုးစားတာ ၃၊ ၄ ရက်ကြာသွားတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဖိုရမ် ၁ခုကနေ တွေ့ပြီး အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ကျွန်တော် အလုပ်မှာ စမ်းတာဆိုတော့ အဲ့ဒီ ၀ဗ်ဆိုက်နာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် လုပ်နည်းလေး ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြဿနာက အဲ့ဒီ ကြွက်ကို Driver သွင်းတဲ့အခါမှာ msmouse.inf ကို Macbook Vista ကောင်းကောင်းသွားမဖတ်တော့ Mouse Information ကို ကောင်းကောင်းမသိဘဲ Driver သွင်းမရဖြစ်နေတာပါ။ အောက်က အချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ပါ။
1) Get this file, msmouse.inf . The file is already inside your computer, C:\_windows\_inf. If you bother to dig there, just grab mine.
2) Put the downloaded file onto Desktop.
3) Plug-in your mouse. Wait forawhile. When they ask to get drivers, choose specific search mode. Point the folder to your desktop.
4) You will see your driver is successfully installed. That's it! Enjoy using your lovely mouse. ^_^
Posted by Wai Phyo at11:39 PM0comments
Busy days come again.
ပြက္ခဒိန်အလိုအရ ၇ရက်သာရှိသော သီတင်းတစ်ပတ်လုံးတွင် ကျွန်တော် တစ်ရက်ကို ၈နာရီနှုန်း အလုပ်လုပ်နေပါသည်။
အလုပ်ချိန်ပြင်ပတွင် လည်း အိမ်မှုကိစ္စဖြင့် ဗာဟီရများနေပါသည်။
တခြားပြိုင်ပွဲများ၊ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဟောပြောပွဲများကိုတက်ရောက်ခြင်းစသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန် အိပ်ချိန်ကို တစ်ရက်၆နာရီ အိပ်ရာမှ ဘယ်လောက်ထပ်လျှော့ရမည်နည်းဆိုသည်ကို ပျစ်ပျစ်နှပ်နှပ် အကြံပြုပေးစေလိုပါသည်။
ကျွန်တော့်၏ အဖြစ်ကို အောက်က ကြွက်ပုံကိုကြည့်ပြီး ပုံဖော်ကြည့်ပါ။
Featuring GeneralComics.com . All credits reserved.
မှတ်ချက်။ အလုပ်များနေခြင်းကို ယခုအချိန်တွင်တော့ ကောင်းသောကာလ တစ်ခုဟု မြင်နေသေးပါကြောင်း။
Posted by Wai Phyo at9:14 AM0comments
Languages & Skillsets for Future - Your Choice?
စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုရဲ့ ဆောင်းပါးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မေးတဲ့လူက အခုလို မေးပါတယ်။
ကျွန်တော် အခု စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ ဘာသာစကားနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်ယူရာမှာ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ပေါ်တူဂီစကားကို လျာထားတယ်ဗျ။ နောက်တခြားဘယ်ဟာတွေ ကောင်းသေးလဲ ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး နောင်တစ်ချိန်မှာ ဘယ်အရာတွေ တိုးတက်လာပြီး ဘယ်နည်းပညာတွေ ခေတ်စားလာမလဲဆိုတာလည်း အရိပ်အမြွက်ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်။
အခုလို မေးမြန်းတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ ကနဦးအနေနှင့် ပေါ်တူဂီဘာသာသင်ယူမယ်ဆိုတာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ တောင်အမေရိကနှင့် အာဖရိက နိုင်ငံတစ်ချို့မှာ အတော်အသုံးဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဈေးကွက်တွေမှာ စီးပွားရေးလုပ်မယ်စိတ်ကူးရှိရင်တော့ ပေါ်တူဂီစကားဟာ အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲဗျ။ နောက်ပြီး စပိန်ဘာသာစကားကိုလည်း မမေ့စေချင်ပါဘူး။ လက်တင်အမေရိက၊ မြောက်အမေရိက စတဲ့ဒေသတွေမှာ စပိန်ဟာလည်း လူပြောအများဆုံးထဲက ၁ခုပါ။ ဥရောပမှာလည်း ပြင်သစ်၊ဂျာမန်စတာတွေနှင့် အပြိုင်အသုံးဝင်ပါတယ်။
အခုလိုပြောနေလို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တရုတ်ကြီးကိုလည်း မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ ဗျူဟာကျကျ ဆုံးဖြတ်မယ်၊ သင့်ပိုက်ပိုက်များများဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် တရုတ်ကိုရွေးပါ။ လူဦးရေ သန်းထောင်ကျော်ရှိတဲ့အတွက် ၁ကျပ်တန်ပစ္စည်းလေးတွေ ရောင်းရင်တောင် ပေါက်သွားရင် ဘီလျံနာဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ အဲ့တော့ အရှေ့တိုင်းမှာဆို တရုတ်စကားသာ ကောင်းကောင်းသင်ပါလေ့။
နောက်ဘယ်နည်းပညာတွေ၊ စကေးတွေသင်ရမလဲဆိုတာကတော့ အရမ်းကြီး ယေဘူယျကျလွန်းတယ်ဗျ။ စကေးအားဖြင့်ဆိုရင် ဒီဘက်ခေတ်ကြီးထဲမှာ သင်နိုင်သလောက် သင်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲ။ အားလုံးက အကျိုးရှိတာတွေကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့် ဈေးကွက်အရပြောရမယ်ဆိုရင် Nanotechnology (ချစ်ပ်စ်အမှုန်အမွှားတွေထုတ်တာတွေ၊ အိုင်ဖုန်းလိုမျိုးပစ္စည်းတွေရဲ့ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းတွေ), Biotechnology (သက်ရှိဇီဝလေးတွေသုံးပြီး လူနေမှုဘ၀ကို မြှင့်တင်ပေးတာတွေ), Information Technology (သတင်းအချက်အလက်နှင့် အဆင့်မြင့် ဆက်သွယ်ရေးအစိတ်အပိုင်းတွေ) ... ဗျူဟာကျတဲ့ သုံးနေရာ၊ အဲ့ဒါတွေကို သေချာစောင့်ကြည့်ပါ။ တနေ့ထက်တနေ့ အပြိုင်တက်လာနေသလို လူသားတွေအတွက် အကျိုးရှိမဲ့ နည်းပညာတော်လှန်မဲ့ အရင်းအမြစ်တွေပါ။ ပေါက်သွားရင်လည်း အပြီးဗျာ။ ကဲ၊ ဒီလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဖြေကြားတာ ခင်ဗျားမေးခွန်းတွေအတွက် လုံလောက်မှုရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ =)
အဟင့် ကျွန်တော်သင်နေတဲ့ ပြင်သစ်စကားကိုကျတော့ ထည့်မပြောသွားဝူး။ ကွိကွိ။
Posted by Wai Phyo at11:00 AM0comments
WiMax : Bright Future?
ဆောင်းပါးတစ်ခုဖတ်ပြီး ဟိုတလောက ရန်ကုန်ပြန်တုံးကတွေ့လိုက်တဲ့ WiMax ကြော်ငြာကို သတိရလို့ပါ။ အဲ့ဒီတုံးက ကျွန်တော် ပြန်ပြောပြတော့ သန့်ဇင်ဦးက ယုံတောင်မယုံဘူး။ ဟုတ်ပါ့မလားတဲ့။ ထွက်တာသိပ်မကြာသေးတော့ အခြေခိုင်ပါ့မလားဆိုပြီး။ ဒါနှင့် ကျွန်တော်သူ့ကို သေချာရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုဒီလုိုပဲလို့။ ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်ကတော့ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုဆိုတာကိုတော့ လက်ခံပါတယ်။ သဘောကျလို့ အောက်မှာ သိသလောက်လည်း မျှဝေလိုက်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ WiMax (Worldwide Interoperability Microwave Access) အကြောင်းပြောရင် Intel ကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ ဒီကနေ့ Wi-Fi လို့ခေါ်တဲ့ ကွန်ယက်ချစ်ပ်စ်တွေကို အင်းတဲလ်က သူ့ရဲ့ ကွန်ပျူတာ ပရိုဆက်ဆာတွေထဲမှာ ထည့်ပြီး အကောင်အထည်စဖော်ကာ ၀ုိုင်ယာလက်စ် လောကကို စပြီးတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက ကနဦး ပဲရှိပါသေးတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနစ် မှာ အင်းတဲလ် ကုမ္မဏီ ကသူ့ရဲ့ နည်းပညာတွေကို တိုးချဲ့ရန်အတွက် အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ Fibre Optic တွေ အရမ်းခေတ်စားနေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ အဲ့ဒီအချိန်က CEO ဖြစ်တဲ့ Andrew Grove က သူ့ရဲ့ လက်ထောက် Maloney ကို အဲ့ဒီ ဖိုင်ဘာတွေ လေ့လာခုိုင်းလိုက်တယ်။ အမေရိကန်မှာ ဖိုင်ဘာကေဘယ်တွေ သွယ်ဖို့ဆိုရင် တစ်အိမ်ထောင် ဒေါ်လာ၁ထောင်ကျော်ကုန်မယ် ဆိုတာလည်း တွေ့ရော Maloney ၁ယောက်လန့်ဖျတ်ပြီး Broadband လိုင်းပြောင်းသွားလေရဲ့။ ချက်ခြင်းပဲ Broadband Man ဆိုတဲ့ အင်္ကျီကြီးကောက်ဝတ်ပြီး ၀ုိုင်ယာလက်စ်ကွန်ယက် နှင့်ပတ်သက်တာတွေ စလုပ်ပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီမှာ သူ ၀ိုင်မက်စ်ကို စတွေ့တာပဲ။
အမေရိကန်မှာ ဆယ်လူလာနက်ဝက်ခ်တွေ၊ အရမ်းခေတ်စားတာမှ Frequency တွေ ရှုပ်ယှက်ကိုခတ်နေတာပဲ။ Die Hard series တွေကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ် =) မယ်လိုနီတစ်ယောက် ဒါကို သတိထားမိပြီး အဲ့ဒီ လှိုင်းတွေအသုံးချကာ တစ်တိုင်းပြည်လုံးသုံးနိုင်တဲ့ အင်တာနက်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ပါတော့တယ်။ သာမန် ၀ိုင်ဖိုင်တွေဟာ ကြိုးမဲ့စနစ်တွေဖြစ်ပေမဲ့ ကိုက်အနည်းငယ်သာရပါတယ်။ လူများလာရင် နှေးလည်းနှေးသွားပါသေးတယ်။ ၀ိုင်မက်စ်ကတော့ အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ မိုင်၃၀ကို အသာလေး လွှမ်းခြုံထားပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်မြို့လုံးဒီစနစ်တစ်ခုထဲ သုံးတဲ့အတွက် အသုံးပြုသူတွေလည်း ခုကွန်ယက်တစ်ခု၊ တော်ကြာတစ်ခု လျှောက်ပြောင်းနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် မောင်းနေတဲ့ကားတွေပေါ်ကတောင် သက်တောင့်သက်သာသုံးနိုင်ပါတယ်။ မြန်နှုန်းအားဖြင့်လည်း အဆ ၅၀ပိုမြန်တဲ့အတွက် ၀ိုင်မက်စ်ဟာ ပိုကောင်းတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုဆိုတာကို မယ်လိုနီက ယုံကြည်လိုက်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး ဖြန့်ဖို့အတွက် ဆယ်လူလာတိုင်တွေကို လည်း အသုံးချမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ သူက ၀ိုင်မက်စ်အောင်မြင်ရန် အလို့ငှာ တခြားကုမ္ဗဏီကြီးတွေနှင့် သဘောတူညီမှုတွေရယူရပါတယ်။ ၀ိုင်မက်စ်ကို ဝေဖန်တဲ့လူတွေ အတော်ဝေဖန်ပေမယ့် မယ်လိုနီကံကောင်းသွားစေတဲ့အချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ၀ိုင်မက်စ်ဘာလို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ ပထမ အင်တဲလ်ရဲ့ ချစ်ပ်စ်တွေကို မိသားစုသုံး ကွန်ပျူတာတွေပေါ်မှာ ဖြန့်ချင်တဲ့ ဗျူဟာကြောင့်ပါ။ ဒုတိယအနေနှင့် Samsung က နက်ဝက်၊ ကွန်ယက်ပစ္စည်းဈေးကွက်ကို ၀င်ချင်နေတဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအချက်ကတော့ Nokia ကလည်း သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းတွေကို ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲ၊ သုံးစွဲသူတွေကို ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမလဲ ချိန်နေတဲ့ အချိန်လဲဖြစ်တယ်။ စတုတ္ထနှင့် နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ Sprint ပါ။ သူက တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာတွေထဲမှာ အားအနည်းဆုံးဖြစ်နေတော့ AT&T တို့၊ T-Mobile တို့နှင့် အပြိုင်ဖိုက်ဖို့ ပိုပြီးကောင်းတဲ့ အင်တာနက်တစ်မျိုးကို လိုချင်နေတဲ့အချိန်ပါ။
ဒီလိုနှင့် WiMax ကို IEEE က အတည်ပြုတဲ့ အဆင့်ထိရောက်လာခဲ့တယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။ ဒါတောင်လွယ်လွယ်နှင့် မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ မယ်လိုနီခမျာ တောင်ကိုရီးယား ဆိုးလ်ကို သွား၊ ဆမ်ဆောင်းက ဥက္ကဌ ကြီးကို ၀ိုင်တိုက်၊ ထမင်းကျွေးလုပ်ခဲ့ရသေးတယ်။ Helsinki ပြေး နိုကီယာ ဌာနချုပ်မှာလည်း အကျိတ်အနယ် ဖြားယောင်းခဲ့ရတာလည်းရှိခဲ့တယ်။ အဆိုးဆုံးက Qualcomm နှင့် ဖိုက်တာပဲ။ Qualcomm က ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ ဖုန်းတော်တော်များများရဲ့ ချစ်ပ်စ်တွေထုတ်တဲ့ကောင်ပေါ့ဗျာ။ 2G, 3G, 3.5G ဘာညာတွေပေါ့။ တကယ်လို့ အဲ့ဒီ ၀ိုင်မက်စ်ကြီးသာ အောင်မြင်သွားရင် လူတွေက VOIP ( Skype လိုမျိုး ) ဖုန်းတွေသာ သုံးတော့မှာကို သိလို့ Qualcomm က IEEE က အဆုံးအဖြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပိုက်ဆံပေး ပယ်ချခိုင်းပါတယ်။ ကြာကြာတော့မခံပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့လည်း အဲ့ဒီလုတွေ မရှိတော့မှ ၀ိုင်မက်စ်လည်း အတည်ပြုခွင့်ရသွားပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ ၀ိုင်မက်စ်က သိပ်အရေးပါပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာဆိုရင် မြို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အနေအထားအရ ဖိုင်ဘာတွေ၊ မြန်နှုန်းမြင့် ကြိုးလိုင်းတွေအသစ်ချဖို့ဆိုတာ တော်တော်ခေါင်းစားစရာပါ။ ဈေးလည်းပိုကြီးပါတယ်။ အဲ့တော့ ၀ိုင်မက်စ်ထောင်၊ တစ်မြို့လုံးသုံး ဒါက ပိုကိုက်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ဆိုကြပါတယ်။ အမေရိကန်မှာတော့ ဒီအပြောင်းအလဲက တော်တော်ခက်မှာပါ။ အစိုးရအဆောက်အအုံတွေ၊ စီးပွားရေးဌာနေတွေ အားလုံးက ကြိုးတွေနဲ့သာ ချိတ်ဆက်သုံးနေကြတုံးပါ။ ဟဲဟဲ ကျွန်တော်တို့ သာသွားပြီ။...
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Intel ရဲ့ နည်းပညာ တွန်းလှန်မှုကို လိုက်မိတဲ့ Sprint က တော့ပြန်လမ်းသိပ်မရှိပါဘူး။ ၁နှစ်ကို ၁၈ရာခိုင်နှုန်းလောက် ထိုးကျသွားတဲ့ စတော့ခ်တွေကို ပြန်ပြီး အဖတ်ဆယ်ရပါမယ်။ ၀ိုင်မက်စ်ကို ကောင်းကောင်းအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီး Customer များများ ဆွယ်နိုင်ရင် ဆွယ်နိုင်၊ မဟုတ်ရင်တော့ သေပြီပဲ။ သူနှင့် ပေါင်းလုပ်တဲ့ Nextel လည်း တော်တော်ခံစားသွားရပါလိမ့်မယ်။ အင်တဲလ်မှာလည်း ကောင်းတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့။ စီအီးအို အသစ် Otellini က ကြိမ်းထားပါတယ်။ မယ်လိုနီ ၅နှစ်တိတိ ဘီလီယမ်ပေါင်းများစွာ အကုန်အကျခံ လုပ်ထားတဲ့ ဒီနည်းပညာကို အားလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ ၂၀၀ဂမှာ ကျွန်တော်တို့ လက်တွေ့ ကြည့်ကြတာပေါ့၊ Standard တွေကတော့ ထွက်သွားပါပြီ။ ဖြန့်ဖြူးပးမယ့် နိုကီယာ၊ ဆမ်ဆောင်း၊ စပရင့်တို့ လက်ထဲမှာ အနာဂတ်ရှိနေပါမယ်။ ဗမာပြည်မှာလည်း သိပ်အသုံးဝင်မယ့် နည်းပညာဖြစ်တာမို့ ကျွန်တော်ကတော့ မယ်လိုနီ ကြီးတစ်ယောက် အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဗျိုး။
Ref: Wiki , BusinessWeek, Intel
Posted by Wai Phyo at1:17 AM0comments
Macbook - Pixel Shader = No PES 2008?
ကျွန်တော် ဟိုတနေ့က ပြောထားတဲ့အတိုင်း ဒီအကြောင်းကို ရေးတာပါ။ ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်ကို လေ့လာဖူးတဲ့လူတွေကတော့ Pixel Shader တွေ အကြောင်းကို နားလည်မှာပါ။ ဒီကောင်တွေက ဂိမ်းတွေမှာ နောက်ခံတောင်တန်းတွေ၊ လှုပ်ခတ်နေတဲ့ရေတွေ၊ အရိပ်တွေစတဲ့ Texture တွေကို ပရိုဂရမ်းမင်းသုံးတွက်ချက်ပြီး ဖော်ဆောင်ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဟာ့ဒ်ဝဲအင်ဂျင်ကို ထောက်ကူပြီး ပုံရိပ်ဖော်ပေးတယ်လို့ အလွယ်ဆိုကြပါစို့။ ဒီကနေ့ ခေတ်ပေါ် ဂရပ်ဖစ်ကဒ်တွေမှာ Pixel Shader တွေ ဘယ်ဗားရှင်း၊ ညာဗားရှင်းကို Support ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီး ရေးထားလေ့ ရှိပါတယ်။ တချို့ မက်ခ်ရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ OpenGL တို့ နေရာတွေမှာတော့ Fragment Shader လို့ လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ အခုဆို ဗားရှင်း 4.0 တောင်ထွက်နေပြီ ကြားပါတယ်။
ထားပါတော့၊ Pixel Shader ကဒီလောက်ပါပဲ။ အခု ပြောချင်တာက PES 2008 ပါ။ ကျွန်တော့် Macbook ရဲ့ GMA 950 လေးကို သူက အဆင့်မမှီဘူးပြောပါတယ်။ Pixel Shader 1.0 တောင် မပါဘူး ပြောနေလို့ပါ။ ဒါနှင့် ဂိမ်းကစားတော့ Warning တက်ပါတယ်။ သို့သော် ကစားလို့ရပါတယ်။ Ignore သာနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ မကျေမနပ်ဖြစ်မိတာက Pixel Shader 2.0 ထိကောင်းကောင်း လက်ခံနိုင်တဲ့၊ ( DirectX 9.0c သုံးရင် 3.0 ထိတောင်ရပါတယ်) GMA 950 ကို ဂိမ်းက အဆင့်မမှီဘူးပြောခြင်းကိုပါ။ အစဉ်တစိုက် အားပေးလာခဲ့တဲ့ Konami ရဲ့ လုပ်ရပ်က ဒီတခါ တော်တော် ဆိုးသွားပါတယ်။
အဲ့တော့ လောလောဆယ်တော့ နည်းနည်းသည်းခံပြီး Ignore နှိပ်နှိပ်ပြီး ကစားကြပေါ့ဗျာ။ စိတ်ရှုပ်တဲ့လူတွေလည်း 3DAnalyze ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲသုံးပြီး Pixel Shader ကို Emulate လုပ်ပြီး ကစားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဆော့ဖ်ဝဲဟာ သင့် ကွန်ပျူတာမှာ အဆင့်မြင့် ဂရပ်ဖစ်ကဒ် ရှိသယောင် ဟန်ဆောင်ပြီး စက်နှင့် အဆင့်မမှီလို့ တားမြစ်ထားတဲ့ ဂိမ်းတွေကို ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ NFS Carbon လိုဟာမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် PES နှင့်တော့ အဆင်မပြေဖြစ်နေပါသေးတယ်။ Konami ရယ် ရက်စက်ပါပေ့။ ..
သုံးကြည့်ပါ။ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ် မီးမလောင်ကြောင်း ၁ ရာခိုင်နှုန်းအာမခံပါသည်။
Posted by Wai Phyo at1:27 AM0comments
Jet Star's 3rd Birthday Promotion
ရန်ကုန်ပြန်ချင်သော အကိုတို့၊ အမတို့အတွက် အောက်တွင် သတင်းကောင်းဖတ်ပါ။ =)
Folks, it's time to travel again. Jet Star's 3rd Anniversary comes in style. Of course, fantastic promotions are there. Yangon trip is starting from $33 for my Burmese friends. And for our Indonesia buddies, there is $3 promotion to Surabaya and other large cities, as well.
Make sure you have Master Card and do your booking before 11th November. Plus, you must travel between 3rd Jan 2007 and 30th Jun 2008.
Happy Trip back to your Home :)
၀ယ်ယူရန် ဟောဒီ Link သို့ သွားပါ။
Posted by Wai Phyo at11:04 AM0comments
Verdict : PES 2008 vs Fifa 2008
ကျွန်တော် PES နှင့် Fifa Series ကို ၅တန်း ၆တန်းလောက်ကတည်းက စကစားပါတယ်။ ယှဉ်ယှဉ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းသိတဲ့အတိုင်း PES/Winning Eleven series က ပိုကောင်းတဲ့ဂိမ်း ၁ခု ဖြစ်တာမို့ ကျွန်တော် ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် Fifa ကို ၃ ၄ရက် လောက်ကစားပြီး ဆက်မကစားတော့ပါဘူး။ ဒီ၁ခေါက်မှာတော့ PES 2008 ကလည်းထွက်တာနောက်ကျနေတာနှင့် Fifa 2008 ကို ကျွန်တော် အတော်လေး ကစားကြည့်လိုက်ရပါတယ်။
ပထမ နှိုင်းယှဉ်ချင်တဲ့ အချက် က Platform တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာတော့ စမ်းစရာ PC ၁လုံးပဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂိမ်း၂ခုလုံးက PC,PS2,PS3,XBox,PSP အကုန်လုံးမှာ ကစားနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒီနေရာမှာ Fifa က PES ထက် အားသာတဲ့အချက်၁ခုက Wii မှာတောင် ကစားလို့ရပါတယ်တဲ့။ .... ကျွန်တော်လည်း Wii ၁လုံးလောက်ရှိရင်ကောင်းမှာပဲလို့။ =P
ဂိမ်း Licensing အပိုင်းကို လူတွေက Konami မကောင်းဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။ အသင်းနာမည်တွေ မှားနေတာကအစပေါ့ဗျာ။ ဒါကလည်း ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ပိုက်ဆံမတရားခွတောင်းတဲ့ ရောဂါကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ၁ပတ် ၂ပတ်စောင့်လိုက်ရင် PES အတွက် Option Files တွေ Patches တွေ ထွက်လာပြီး ပြန်လည် အိုကေ သွားမှာပါ။ ဒီအပိုင်းကတော့ နှစ်ဖွဲ့လုံးတူတူပါပဲ။ Fifa မှာ update လုပ်ရတာ ပိုတောင်ခက်ပါသေးတယ်။
ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းအနေနှင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် Fifa က အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့် Macbook Vista မှာ PES က ပရိသတ်တွေ မဖော်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အတော်လေး ကသိကအောက်ဖြစ်ရပါတယ်။ လူမျက်နှာအပိုင်းနှင့် ကြည့်ရင်တော့ ကျွန်တော် က PES ကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ မျက်နှာပဲပြောတာနော်။ တခြားဂရပ်ဖစ်ပိုင်းတွေမှာ Fifa က သာပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီနှစ်ဆိုးတာ၁ခုက PES ရဲ့ Interface ကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ထားမှုပါပဲ။ အမည်းရောင် ဖောင်းကြွတွေ၊ တောက်ပတွေ၊ ဖန်သားပြင်လို Menu တွေက ၀င်းဒိုး ဗစ်စ်တာ သုံးရသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော် မကြိုက်တာကတော့ ပြောဖို့မလိုဘူးပေါ့ဗျာ။
Commentary ပိုင်းနှင့် ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Andy Gray, Martin Tyler တို့လို Sky ကလူတွေ ပြောတဲ့ Fifa က ပိုပြီး ရီရ၊ နားထောင်လို့ ကောင်းတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ နည်းနည်းဖျင်းတဲ့ PES ရဲ့ commentary က ရှုံးသွားပါတယ်။
ကင်မရာအယူအဆမှာ Fifa က အများကြီး ရင်းနှီးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါမယ်။ လူကို Bird Eye View တို့ First Person View တို့ကြည့်တဲ့နေရာတွေမှာ အတော်လေးကောင်းအောင်လုပ်ထားပေးပါတယ်။ Replay သိမ်းတာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ PES ရဲ့ Wide Camera Mode ကိုသာ ကစားနေကျဖြစ်လို့ ကစားရတာ မသက်မသာပါပဲ။ ကင်မရာကတော့ ကျွန်တော်နှင့် ခွင်တဲ့တာက PES ပါပဲ။ နည်းပညာပိုင်း ကြိုက်တာတော့ Fifa ပါပဲ။
ဂိမ်းအင်ဂျင်ပိုင်းမှာတော့ PES က ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲထားပါတယ်။ TeamVision လို့ခေါ်တဲ့ AI အသစ်ကို သုံးထားပြီး၊ ဒီ AI ဟာ ကစားသူရဲ့ အလေ့အထ၊ ပွဲ၁ပွဲလုံးမှာ ရှိနေတဲ့ ပလေယာတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု၊ နေရာယူမှု စတာတွေကို သေသေချာချာသုံးသပ်ပြီး ကစားသူစိတ်ကြိုက် ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး Strategy အပိုင်းတွေမှာလည်း အရင်လိုပဲ လူရွေးတာတွေ၊ နေရာချတာတွေ၊ လူချိန်းတာတွေကို သေချာ စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရပါတယ်။ ပိုပြီး ပရိုကျတယ်လို့ ခံစားရတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီနေရာမှာ Fifa ကလည်း နောက်ကျမကျန်အောင်လိုက်ပါတယ်။ သူ့မှာလည်း Be A Pro လို့ခေါ်တဲ့ သင်ကြိုက်တဲ့ လူကိုရွေး၊ Tournament ၁ခုလုံး၊ ပွဲ၁ပွဲလုံး ဒီတစ်ယောက်ကိုပဲ ထိန်းပြီး ကစားလို့ရတဲ့ mode အသစ်တွေ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Zone ၁ခုထဲပဲ ကွက်ထိန်းလို့လည်းရပါသေးတယ်။ ဆိုပါဆို့ တစ်ပွဲလုံးနောက်တန်းလေးယောက်ပဲ ကိုယ်က ထိန်းရတာမျိုးပါ။ FIFA ကလည်း intelligent soccer ဆိုတာကို ထည့်ထားပါတယ်တဲ့။ ၁စက္ကန့်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါင်း ၁၀၀၀ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Fifa ရဲ့ လူရွေးပုံ၊ နေရာချပုံတွေဟာ သိပ်ပြီး စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့မရသေးပါဘူး။ ကစားနေရင်း တခြား Strategy တစ်ခုကောက်ပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ Fifa မှာ အတော်ခက်ပါတယ်။
ဂိမ်းကို တကယ်ကစားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ PES ဟာ အရင် ဗားရှင်းတွေထက် အဆ ၂၀လောက်ပိုမြန်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ အရင်တုံးကဆို ဘောလုံး၁ခါပေးရင် နှေးနေတာနှင့် သိပ်မရောက်ချင်ပါဘူး။ အခုပြန်မြန်ထားပါတယ်။ လူပေးမှုတွေ၊ လူကပ်ထားမှုတွေ၊ မြှောက်တင်ဘောတွေ ပိုပြီး တိကျ ပြတ်သားလာတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဘောလုံးကို ခြေထောက်ထဲမှာ ကြာကြာကိုင်ကစားနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးပိုများလာပါတယ်။ ကန်ချက်တွေပိုပြင်းလာပြီး၊ အရင်တုံးက တွေ့ရခဲတဲ့ အဝေးကန်ချက်တွေ တွေ့လာရပါတယ်။ ရှေ့တန်းတွေ ပိုကောင်းလာတဲ့ သဘောပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်ဟာ အရမ်းစိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်။ PES ဟာ သူ့ရဲ့ ဂိမ်းကို တစ်ဖက်သတ်မဖြစ်အောင် ထိန်းပေးနိုင်တဲ့အတွက် နာမည်ကြီးတာပါ။ ခုလို ဂိုးသွင်းရလွယ်လာတယ်ဆိုတာက နည်းနည်းတော့ မကောင်းပါဘူး။ တခြား overall ကတော့ ဂိမ်းကစားရတဲ့ အရသာကတော့ အင်မတန် Realistic ဆန်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ Fifa လည်း အတော်လေးကောင်းလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နောက်တန်းတွေ ပိုမာကျောလာပြီး ဂိုးသမားတွေကို အလွယ်တကူ သွင်းလို့မလွယ်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် Professional Mode ရွေးပြီးဆော့တာတောင် အတော်ကန်ရခက်ပါတယ်။ အဝေးဘောမှန်သမျှကိုလည်း မိ နေလို့ နည်းနည်းတောင် စိတ်ညစ်သွားတယ်။ လူပေးတဲ့နေရာမှာ လည်း Manual Through Ball, Manual Passing တွေ အသစ်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက် နည်းနည်းအားစိုက်ပြီး ပေးရပါတယ်။ ချိန်ဆပြီး ဘောလုံးပို့ပေးရပါတယ်။ လူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားပုံတွေလည်း ပိုပြီး သပ်ရပ်လာပြီး Right Analog Stick ဟာ အရေးပါတဲ့ ခလုတ် ၁ခုလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီ Right Stick ကို ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်ရင် လှပတဲ့ အလိမ်အခေါက်တွေကို ပိုပြီး လုပ်နိုင်လာပါတယ်။ ဥပမာ ရော်နယ်ဒင်ဟိုစတိုင်ပေါ့ဗျာ၊ ဘာမှ လုပ်စရာမလိုဘူး။ အဲ့ဒီ Stick လေးကို ၁ခြားခလုတ်၁ခုခုနှင့် တွဲပြီးသုံးရုံပဲ။ ဒါပေမယ့် ဂိမ်းပလေး မှာတော့ ကျွန်တော်က Fifa ကို နည်းနည်း ထုံနေသေးတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဗျ။ လူတွေက အလိုက်သတိ ပြေးမထွက်ပေးသွားတာမျိုး၊ Positioning ပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ ကော်နာထောင်လိုက်တယ်၊ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော့် နောက်တန်းက လူတစ်ချို့လည်း ရောက်လာရမှာပေါ့၊ ဒါမျိုးကို Fifa က မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ PES မှာ အရပ်ရှည်တဲ့လူကို သူ့ဖာသာ တွက်ချက်ပြီး အရှေ့ကိုတက်လာတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဂိမ်းပလေးကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာ ပိုထင်ရှားလာတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာ ကောင်တာ ကစားနေတဲ့ အသင်းက ကျွန်တော့်နောက်တန်းသမားတွေ ချက်ခြင်းပြန်မရောက်နိုင်ရင် ကောင်းကောင်းပညာပေးသွားမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် Fifa ကတော့ အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုလည်း ကောင်းကောင်းအသုံးချတာ မတွေ့ရဘူး။ Fifa မှာ နောက်တန်းသမားတွေက ကောင်တာ ကောင်းကောင်းမကစားပေးဘူး။ ဂိမ်းကို ကောင်းကောင်း Read မလုပ်ဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Gameplay ပါပဲ။ Fifa နှင့် PES ရဲ့ ကွာတဲ့ Gameplay ပါပဲ။
Fifa က ပိုကစားရခက်လာတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ လူလည်းလိမ်ခေါက်လို့မလွယ်တာတွေဖြစ်လာတယ်။ ဒါကို ကြိုက်တဲ့လူကလည်း ပိုကြိုက်မှာပါ။ ခက်ခက်ကစားချင်တယ်ဆိုရင် တော့ Fifa ကို ရွေးပေါ့။ ဒါပေမယ့် Gameplay ကို အဓိက ဆော့ချင်တဲ့လူတွေလည်း စိတ်မပျက်ပါနှင့် PES ရဲ့ third party patches တွေ ထွက်လာတာနှင့် ကစားရပြန်ခက်လာမှာပါ။ အဲ့တော့ PES ကို ကစားပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်က တော့ လောလောဆယ် Fifa ကို ဖျက်ပလိုက်ပြီး PES ပဲ ကစားနေပါတယ်။ ဖျက်ပစ်တယ်ဆိုတာ ရက်စက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ဟာ့ဒစ်၁လုံးမ၀ယ်ရသေးတော့ သိမ်းစရာနေရာမရှိတာနှင့် ခံနေရတာပေါ့ဗျာ။
အဲ့တော့ နောက်ဆုံးကောက်ချက်ချရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်က PES ကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ သူ့မှာ အသုံးမကျတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးပါလာတာမှန်ပေမယ့် ဂိမ်းပလေးက အတော်ကောင်းနေပါတယ်။ ကစားရတာကိုက တကယ့်ဘောလုံးပွဲလိုပဲ။ ဒါဟာ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ခံစားမှုပေါ်မှာလည်း မူတည်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Loyalty ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့အတိုင်းအတာမှာ Fifa ရဲ့ လူကြိုက်များမှု မြင့်တက်လာတယ်ဆိုရင်လည်း မအံ့သြပါနှင့်။ သူတို့တကယ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားထားပါတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာပြီး ကွာဟချက်ကျဉ်းမြောင်းလာပါပြီ။ အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ PES ပါပဲ။
p/s : Macbook သမားတွေနှင့် PES 2008 မှာ ဘယ်လိုတွေ့ကြုံရသလဲ ဆိုတာကို နောက်တစ်ပို့စ်မှာရေးပါမယ်။
Posted by Wai Phyo at11:34 AM0comments